ဦးဂင်ကြီး: 5/1/09 - 6/1/09
မေ ၃၀ .. ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်မှု ၆-နှစ်မြောက် ဆန္ဒပြပွဲ (အော်ရီဂွန်)
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 9:22 AM ,0comments
သံတိုင်ကြားက လရောင်ဆီ ...(ဝင်းတင့်ထွန်း)
‘ သံတိုင်ကြားက လရောင်ဆီ ... ’
ကိုင်း - ကြားလို့မှ မဖွယ်မရာ ..၊၊
အောင်ဆန်းစုကြည် - ဆိုတာ
တိမ်ဖုံးပေမဲ့ သာမြဲသာ ... ၊၊
တဖြာဖြာနဲ့ ဝင်းပရင်း ...
ကမ္ဘာကပါ မြင်ရရင်း ... ၊၊
ကြယ်နီ တို့ -
ကြယ်ဝါ တို့ -
ကြယ်ဖြူ တို့ -
ကြယ်စင်တို့ ရေ ...
အမှောင်တွေကို တကယ်မုန်းရင်ဖြင့် -
တိမ်ညစ် တိမ်မှောင် တိမ်လွှာပုပ်တို့ကို
တောထုတ် ဖြိုခွင်း ...
( ကိုင်း .. ) ပြကြ အလင်း ....၊၊ ၊၊
(မတရားသဖြင့်အမှုဆင် ရုံးတင်တရားစွဲဆိုခြင်းခံနေရတဲ့၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - သို့)
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 5:22 AM ,2comments
Oregon မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အပတ်စဉ် ဆန္ဒပြပွဲ
Oregon ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး ကြွေးကြော် ဆန္ဒပြပွဲကို အပတ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲတွင် လက်ကမ်းစာစောင်များဝေငှပြီး အောက်ပါကြွေးကြော်သံများနှင့် ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
Free… Free…… Free …… Burma…….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်……… ချက်ခြင်းလွှတ်……. ချက်ခြင်းလွှတ်။
Free… Free……… Aung San Suu Kyi ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး… ချက်ခြင်းလွှတ်… ချက်ခြင်းလွှတ်။
Free… Free… All political Prisoners ။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်.... ချက်ခြင်းလွှတ်… ချက်ခြင်းလွှတ်။
Free… Free… Minn Ko Naing ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ…… အလိုမရှိ…… အလိုမရှိ။
2010 Election… No… No ။
ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ… အောင်ရမည် ….အောင်ရမည်။
What do we want…… We want democracy ။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 10:02 PM ,0comments
နအဖအဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီလိုဖမ်းဆီးရုံးတင်ဖို့ အခွင့်အရေးရသွားတာ- ဒါမှမ ဟုတ် သူတို့ရဲ့လုပ်ကြံမှုအောင်မြင် သွားတာဟာ နအဖအဖို့နိုင်ငံရေးအရ လက်ဦးမှုရသွား တယ်လို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဆက်ဖြစ်လာတာတွေနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကို ပြန်တွေးလိုက်တော့ ဒါဟာနအဖအဖို့ကံကောင်းတာလား၊ ကံဆိုးတာလားစဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေ ပါတယ်။
စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူထုနဲ့အဆက်ဖြတ်ရေးဟာ သူ့တသက် ကိုယ့် တသက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စလို့ သတ်မှတ်ထားကြဟန်တူပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေအိမ်ချုပ်သက်တမ်း စေ့တဲ့အခါမှာ အခု ဒီဖောက်ထွင်းမှုမှာအိမ်ရှင်ကိုစွဲချက်တင်၊ ထောင်ချဖို့ လုပ်ကြံတော့တာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့တွက်ထားတာတွေထဲမှာ မပါတာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာနေလို့ ဗိုလ် သန်းရွှေတယောက်ထိုင်နေအကောင်းသားလို့ဆိုရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
အိမ်ဖြူတော်မှာ အိုဘားမားတက်လာတဲ့နောက် နအဖအစိုးရဟာ သူတို့ဖောက်ချင်နေတဲ့ ရွှေ လမ်းငွေလမ်းတော့ဖြင့် ပေါက်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်ထင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည့်ကိုရုံးတင်တဲ့ ဒီကိစ္စတခုတည်းနဲ့ပဲ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ “ဆုချတာခံရမလား ထင်လို့ဝင်သွားတာ၊ ထိပ်ချတာခံလိုက်ရတယ်”ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း ရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းကလည်း နအဖကို ကလေးငေါက်သလိုအပြစ် တင်တာခံလိုက်ပြီး ကုလ သမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတောင် ဒီကိစ္စအတွက် စိတ်ပူတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗမာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စကိုပြောခဲလှတဲ့ တရုတ်တို့၊ အာစီယံတို့ကတောင် “ပညာပေး” တာခံနေရပါပြီ။ နောက်ပြီး ဂျပန်လိုနိုင်ငံကိုရှင်းပြရ၊ ထိုင်းနဲ့ကတောက် ကဆဖြစ်ရ၊ ဒါ့အပြင် အီးယူကဘာများ ပြောလာဦးမလဲ၊ တခြားနိုင်ငံတွေကဘာတွေ ပြောဦးမလဲဆိုပြီး ထမင်းလုံး တစ္ဆေခြောက်တာ ညတိုင်းခံနေရပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သံခင်းတမန်ခင်းအရ၊ နိုင်ငံ တကာဆက်ဆံရေးအရ နအဖအဖို့ အကြီးအကျယ်နစ်နာရတဲ့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ကိုရုံးတင်လိုက်တာဟာ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာလား၊ စိတ်ညစ်စရာလား ဆိုတာကို သိချင်ရင် ရန်ကုန်နဲ့တခြားòမိ့ကြီးတွေမှာ လုံခြုံရေးတွေအပြည့် ယူနေရတာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ပဒူအုံကိုတုတ်နဲ့ထိုးမိသလို ဖြစ်ဖို့များနေပါပြီ။ တကယ် လို့သာ ဒီကိစ္စကြောင့်လူထုအုံကြွလာတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကသွေးထိုးပေးလို့၊ ပြည်ပက မြှောက်ပေးလို့ စသဖြင့်ပြောလို့မရတာ သေချာနေပါပြီ။ ဗမာပြည်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးကိစ္စတွေ မှန်သမျှဟာ အုပ်စိုးသူများဖက်က မတော်မတရားလုပ်တဲ့အတွက် ပေါ်ထွက်လာတာတွေ ချည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတရားပါ။ စားဝတ်နေရေးနဲ့လုံးချာလိုက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ အလကားနေရင်း လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်မရှာကြပါဘူး။ သံဃာတော်များလည်း အလားတူပါပဲ။
ဒီလို တိုင်းပြည်အတွက်အရေးပါတဲ့အမှုကြီးတခု၊ နိုင်ငံတကာကလည်း အာရုံစိုက်မယ့်
အမှုမျိုးကို ဖန်တီးလိုက်ရတာဟာ တကယ်တော့နအဖအတွက်ပြောရင်လည်း မရဲပဲကျွဲပြဲစီးရ တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ သံတမာန်လောကကိုဟန်ပြအနေနဲ့ တရက်ထဲသာ တရားရုံးတက် ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ ကျန်တာအားလုံးကို ထောင်ထဲမှာတံခါးပိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ဖက် က ကျိုးကြောင်း မခိုင်လုံကြောင်း၊ မရိုးသားနိုင်ကြောင်း ဝန်ခံတာတမျိုးလို့ယူဆရင်ရပါတယ်။
အခုတော့အမှုကို လူအများရှေ့မှောက်မှာ စစ်ဆေးရေးဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာ ကျယ်လောင် သထက်ကျယ်လောင်လာနေပါပြီ။ အစိုးရပြတဲ့သက်သေတွေကို စစ်ဆေးပြီးခဲ့ သလောက်အရ ဆိုရင် ဥပဒေအရ နအဖမုချရှုံးမှာပါ။ သူတို့ဖက်ကသက်သေတွေရဲ့အစစ်ခံချက်တွေဟာ သူတို့အတွက်အထောက်အကူလုံးဝမပြုပါဘူး။ တကယ်ဆိုရင် တရားခံပြသက်သေတွေကို တောင် စစ်နေဖို့ မလိုလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နအဖဟာ သိုးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင် စားချင်တဲ့ဝံပုလွေလိုပဲ “နင်မဟုတ်နင့်အဖေပဲ”လို့ ပြောပြီး အပြစ်ပေးဖို့လုံးပမ်းမှာပါပဲ။ ဒါမျိုးကို ထောင်ထဲမှာတံခါးပိတ်စစ်ဆေးတဲ့ရုံးမျိုးမှာလုပ်ရတာ ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုကို အများပြည်သူတက်ရောက်နားထောင်နိုင်တဲ့ တရားရုံးမှာစစ်ဆေးရေး ဟာ တရားမျှတမှုအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်တရားခွင်ကို လူထုမျက် မှောက်ရောက်အောင် တောင်းဆိုကြရပါမယ်။ ဒါဟာ တရားမျှတ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ အပြင် လူတိုင်းသဘောတူနိုင်တဲ့ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုမှာ ထိပ်တန်းတင်ရမယ့် တောင်းဆိုချက်၊ ကြွေးကြော်သံဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတခါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ကိုရုံးတင်တဲ့ကိစ္စဟာ ၂ဝ၁ဝရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဖို့ပြင် နေတဲ့လူ တွေအတွက်တော့ အတော်လေး အကြပ်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နအဖလုပ်လိုက်တာက သူတို့ကိုယမ်းချေးပန်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာသူတို့ အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သဘောထားပေးဖို့ မေးမြန်းတောင်းဆိုလာရင် သူတို့ဟာအတတ်နိုင်ဆုံး ခေါင်း ရှောင်ချင်ကြမှာပါ။ နအဖ အလိုကိုလိုက်ပြောရင် မဲရမှာကိုထိခိုက်မယ်၊ နအဖကိုဆန့်ကျင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်တောင်မှ ရချင်မှရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ တတိယအင်အားဆိုသူ တော် တော်များများက ပြောဖို့ခေါင်းရှောင်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ ၂ဝ၁ဝရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီအတွက် လေ့ကျင့်နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့နဲ့ပြောင်းပြန်၊ ပြည်သူလူထုကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ခံစားချက်၊ ကိုယ့်အမြင် တွေကို ရဲရဲတင်းတင်းပဲ ဒေါသနဲ့ ပြောနေကြပါတယ်။ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် တွေ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ အချိန်မရွေး ပေါက်ကွဲထွက်နိုင်တယ်ဆို တာကို ဗမာပြည်အရေးနားလည်သူတိုင်း တွေးမိကြမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အမှုဆင်ပြီး တင်တာဟုတ်မဟုတ် ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကို ဘယ်သူကမှ အချိန်ကုန်ခံ ဆွေးနွေး မနေကြတော့ပါဘူး။ ဘာကို-ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်း မလဲဆိုတာကိုပဲ ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ၊ သံဃာ၊ ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ မြို့နေဆင်းရဲသား၊ စာရေးစာချီဝန်ထမ်း၊ ပညာရှင်၊ ကုန်သည်ပွဲစား၊ စစ်ဗိုလ်စစ်သား၊ အိမ်ရှင်မ၊ မပြောပဲဘယ်သူမှ မနေပါဘူး။
ဒီအခြေအနေကို နအဖအစိုးရလည်းမသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက် အနည်းဆုံး ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်တဲ့ ကာလနဲ့ ကျင်းပတဲ့ကာလမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလူထုထဲ မှာ မလှုပ်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ထားဖို့က ပိုအရေးကြီးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတိုဖက်က ကြည့်ရင်လည်းသေမြေကြီး-ရှင်ရွှေထီး လုပ်လိုက်ရတာပါ။ သူတို့က အမှုကိုအမြန်ပြီးပြတ် အောင် တက်သုတ်ရိုက်စစ်နေတာ၊ ကမျောသုံးပါးစွဲချက်တင်တာတို့ကို ထောက်ကြည့်ရင် နအဖစစ်ဗိုလ်တွေဘယ်လောက်ခြောက်ခြား နေတယ်ဆိုတာ အတိုင်းသားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 11:29 PM ,0comments
Oregon မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 9:36 PM ,0comments
၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်ခင်း ၁၀ နာရီမှစတင်၍ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ် ပေါ့လန်းမြို့ Down Town တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ဆောင်ရွက်သူ (၁၀၀) ခန့် လုပ်ကြံ ဖမ်းဆီးခံရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ကြွေးကြော် သံများနှင့်အတူ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် ( Zomi National Congress) ၊ Oregon Rohingyr Society USA ၊ Burma Action Committee ၊ ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းများ၊ DPNS ပါတီဝင်များ၊ NLD ပါတီဝင်များ၊ ကရင်၊ ချင်း စသောတိုင်းရင်သားများ၊ မြန်မာ့အရေးစာနာသူ အမေရိကန်များ၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများပါမကျန် တက်ရောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မလွှတ်မခြင်းအပတ်စဉ် နိုင်ငံတကာ မိသားစုများနှင့်အတူ ဆက်လက်၍ ဆန္ဒများကို ထုတ်ဖော်သွားကြမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ဤသတင်းများကို ထပ်ဆင့်ဖော်ပြလိုပါက အောက်ပါရဲဘော်များထံမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းဆိုပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါ သည်။
ကိုအေသင် (ဖုန်း - ၅၀၃ ၂၃၅ ၃၆၆၃)
ကိုထွန်းထွန်း (ဖုန်း - ၅၀၃ ၃၃၄ ၉၉၉၇)
ကိုပံသု (ဖုန်း - ၅၀၃ ၄၃၂ ၃၄၅၀)
အော်ရီဂွန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီိအရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 7:01 PM ,0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်နှင့် အင်းလျားကန် အပေါ်စီး မြင်ကွင်း။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ကို အနီရောင် စက်ဝိုင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အဖမ်းခံခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသော နေရာကို လေးထောင့်ကွက်ဖြင့် ဖော် ပြထားသည်။( ဓါတ်ပုံ- Irrawaddy Magazine)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ထဲကို နိုင်ငံခြားသားတယောက် ရေကူးဝင်ရောက်သွား တယ်။ ပြီးတော့ပြန်ထွက်အလာမှာ ဖမ်းဆီးရမိတယ် အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားဟာ ဒေါ်စုနေအိမ်ထဲမှာ (၂) ရက်နေထိုင်ခဲ့တယ် စသညဖြင့့််သတင်းတွေကို စစ်အစိုးရပိုင်သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တယ်။ ဒီသတင်းထွက်လာပြီးတော့ ဘလော့စာမျက်နှာတွေက စီဘောက်တွေထဲမှာ IP ကိုစစ်လိုက် တော့ မြန်မာပြည်ထဲကပါ အဲ့ဒီလူတယောက်က အခုလို စီဘောက်တွေမှာရေးလာပါတယ်။
မိုးထက်မြင့်: အန်တီစု လွတ်ခါနည်းမှ နောက်တစ်မှု ထပ်ပေါ်လာတယ်။
8 May 09, 00:13
မိုးထက်မြင့်: အဲဒီနိုင်ငံခြားသားက CIA ကဖြစ်နိုင်တယ်။
8 May 09, 00:12
မိုးထက်မြင့်: အန်တီစု လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ရတယ်ဗျ။
မိုးထက်မြင့်: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ထဲကို နိုင်ငံခြားသားက ခိုးဝင်ပြီး ၂ ရက်တောင် နေခဲ့တာတဲ့။
ရုတ်တရက် သာမန်နိုင်သားတယောက်အနေနဲ့ ရိုးရိုးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်စုလုံခြုံရေး အတွက် စိုးရိမ်သယောင်ယောင်စာတကြောင်းကလွဲလို့ ကျန်တဲ့စာကြောင်းတွေက စံနစ်တကျ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ထားတာပါ။ နှစ်ရက်တောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ စစ်အစိုးရသတင်း နဲ့ထပ်တူပါပဲ။ CIA ကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုဟာ CIA နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေရှိနေ တယ်လို့ စွပ်စွဲတာပါ ဆိုလိုခြင်တာက နအဖစစ်အုပ်စုသုံးသုံးနေတဲ့ ပြည်ပအားကိုးပုဆိန် ရိုးဆိုတာကို တဖက်လှည့်ပြောလိုက်တာပါ။ နိုင်ငံခြားသားတယောက်ခိုးဝင်ပြီး (၂)ရက်တောင် နေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာ သတင်းကိုလိုသလိုပုံသွင်းထားတာပါ ဆိုလိုခြင်တာက လူထုခေါင်း ဆောင်အဖြစ် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးကလေးစားတဲ့ ကမ္ဘာလေးစားတဲ့ ဒေါ်စုကို သေးသိမ်စေ အောင်၊ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တရားမဝင်ဆက်သွယ်နေသယောင် တံဆိပ်ကပ်လိုက်တာပါ ဂုဏ်သိက္ခာချလိုက်တာပါ။ ဒေါ်စုလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတယ် ဆိုတာဟာ လိုအပ်လာရင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြနေတာပါ တကယ်တမ်းဒေါ်စုကိုလုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှုကို လုပ်ခဲ့ဘူးတာဘယ်သူတွေလဲ ဒေါ်စုနဲ့ ဦးတင်ဦးတို့ပါတဲ့ NLD ပါတီရဲ့ ခရီး သွားကားတန်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း ဒေသက ကျည်ရွာ နားမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြ တာပါ ကံကောင်းလို့ ဒေါ်စုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဘေးက သီသီကလေးလွတ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါဘယ်သူတွေလုပ်တာလဲဆိုတာရှင်းနေတာပါပဲ ဒါဟာသမိုင်းမှာရှင်းရမဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ကြံမှု ကြီးပါ။ဒီတော့ ဒေါ်စုဟာလုပ်ကြံခံရဘူးပါတယ် NLD လူငယ်တွေနဲ့ အန်ကယ်ဦးတင်ဦး တို့ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့်သာ သီသီကလေးလွတ်ခဲ့ရတာပါ။
နောက်ပထမဆုံးရေးထားတဲ့ အန်တီစုလွတ်ခါနီးမှ နောက်တမှုထပ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုတာဟာ နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ စံနစ်တကျ အကောက်ကြံမှုလို့တွေးမိပါတယ် ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဒီပဲယင်းမှာ လုပ်ကြံခံရတဲ့ (အသက်ဘေးမှ သီသီကလေးလွတ်ခဲ့တဲ့) ဒေါ်စုကို စစ်အစိုးရက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့ပါတယ်။ (၅)ျနှစ်ပြည့်တော့ ဥပဒေအရ ဆက်ချုပ်ခွင့်မရိဘူးဆိုတာ ရှင်းနေပါလျှက်နဲ့ စစ်အုပ်စုကဆက်ချုပ်ပါတယ် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုတရားခံတွေကို စစ်အုပ်စု ဒီကနေ့အထိ လုံဝမဖေါ်ထုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ကြံခံရတဲ့ ဒေါ်စုကိုတော့ သူတို့ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့တောင်မညီပဲ ဆက်လက်ချုပ်ထားဘို့ (၁) နှစ်ထပ်တိုးလိုက်တာ အား လုံးအသိပါ။အခု ဒီိသတင်းထွက်လာချိန်ဟာ ဒေါ်စုနေအိမ်အကျယ်ချုပ် (၆) နှစ်ပြည့်ခါနီးမှာ ဖြစ်လာတာပါ။ စစ်အုပ်စုဟာ ဒေါ်စုအပေါ်မှာ အင်မတန်အညှိုးကြီးတယ်ဆိုတာ သိသာမြင်သာ တဲ့အချက်ပါ။ နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ ကြေငြာထား တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကတောင်းဆိုနေတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေး အကျည်းသားတွေလွှတ်ရေး ဆိုတာကြီးက သူတို့အတွက် အင်မတန်အကြပ်ရိုက်နေရတဲ့ကိစ္စပါ။ NLD ပါတီကလည်း ဒီအချက်ကို နအဖကို တရားဝင်တောင်းဆိုထားတာပါ။ ပြည်သူလူထုကြီးကလဲ မတရားဖမ်းဆီး ထားတာကို လူတိုင်းသိပါတယ် ဒါကြောင့် ဒီသတင်းမှာ စစ်အုပ်စုရဲ့ ကြိုတင်လုပ်ကြံမှုတွေ ပါတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေတာပါပဲ။
အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ သတင်းတခုဖြစ်အောင်လဲလုပ်ထားတာပါ အဖမ်းခံရတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဟာ အမေရိကန်နိုင်သားလို့ပြောတယ် သတင်းမှာ ဓါတ်ပုံတောင်မဖေါ်ပြပါဘူး နောက်တခုက သက်ဆိုင်ရာသံရုံးက တွေ့ခွင့်တောင်းတော့လဲ တွေ့ခွင့်မပေးဘူး ဒီအချက်တွေက စဉ်စား စရာတွေပါ။ နောက်ဆုံးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ ဒေါ်စုကိုသွားဆေးကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ကို ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိပဲ ဖမ်းထားတဲ့ကိစ္စပါ။ စစ်အုပ်စုဟာ သမိုင်းမှာရှင်းရမဲ့ကိစ္စ တခုကို ထပ်မံကျူးလွန်နေတာပါပဲ။ လုပ်ထားတာက ဒေါ်စုအိမ်ဟာမလုံခြုံသယောင်လုပ်ထားပါတယ် ဒီလိုမလုံခြုံမှုဟာ စစ်အစိုးရမှာလုံးလုံးတာဝန်ရှိပါတယ်။ တခြားမည်သူ့မှာမှတာဝန်မရှိပါဘူး ဒေါ်စုရဲ့ အသက်အန္တရာယ်အတွက် တိုက်ရိုက် တာဝန်ရှိသူဟာ စစ်အစိုးရပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောနေရသလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ တကယ့်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကို ခံနေကြရတာပါ ဒီလို နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ထောင်ထဲထည့်ထားပြီးလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးကိုက နိုင်ငံတ ကာနဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ အမြင်မှာ အင်မတန်မှ အကျည်းတန်အရုပ်ဆိုးနေတာပါ။ တ လျောက်လုံးလဲလိမ်လည်လာခဲ့တာပါ ၁၉၉၀ ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အာဏာအပ် ပါ့မယ် စစ်တန်းလျားပြန်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ ဒီကနေ့အထိ အာဏာကိုမတရားရယူ ထားတာ ရှင်းနေတာပါပဲ။ ဒီတော့စစ်အုပ်စုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘယ်လောက်ယုံကြည်စရာရှိမှာလဲ အခြေခံဥပဒေကို စိတ်ကြိုက်သူတို့ရေးတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံးညီလာခံဆိုတာကြီးလုပ်တယ် ရေးပြီးသားတွေကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုခိုင်းတာတောင်မှ စိတ်ကြိုက်ခေါင်းခေါက်ဖိတ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လုပ်သွားခဲ့တာပါ ဒီမှာတောင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေက တင်တဲ့အချက်တွေတောင် ချောင်ထိုးခံ ခဲ့ကြရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ အတိုက်အခံတွေကိုတော့ မှန်မှန်ခြေမှုန်းပါတယ် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးမှာဆို ရဟန်းသံယာတွေကိုတောင်အညှိုးတကြီး ရက်စက် ခဲ့တာပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို စစ်မြေပြင်မှာ ရန်သူ့စခန်းစီသလို ဝင်ရောက်စီးနင်း ဘုန်း တော်ကြီးတွေကိုဖမ်း၊ရိုက်၊ထောင်ချ မျိုးစုံလုပ်ခဲ့တာ သိတ်မကြာသေးပါဘူး အားလုံး ပူပူနွေးနွေးကြီးမှတ်မိနေကြတာပါပဲ။ စစ်အုပ်စုဟာ ၂၀၁၀ မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ ကြေငြာတာဟာ ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင် စစ်အုပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အရပ်သားပုံစံပြောင်းပစ်ချင်တဲ့ စစ်အုပ်စုတဖြစ်လဲအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ခြင်တာပါ။ ဒီမှာသူတို့အတွက် အဓိက အနှောက်အယှက် လိုဖြစ်နေတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျည်းသားတွေပါ ပြန်လွတ်ပေးဘို့ စစ်အုပ်စု အင်မတန်ကြောက်နေတာပါ ပြန်လွတ်ပေးရင် လူထုခေါင်းဆောင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတော့ လူထုကြီးနဲ့ပြန်ဆက်စပ်သွားမှာ စစ်အုပ်စုအကြောက်ဆုံးပါ။
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့(၈၈)ကျောင်းသားအုပ်စုတွေကို ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တုန်းက စစ်အုပ်စုမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ရင် NLD ပါတီနဲ့ ကျောင်းသားတွေကြားမှာ ပြသာနာ ကြီးထွားနိုင်တယ်လို့ တွက်တာပါ ဒီတော့မှအမြတ်ထုတ်ဘို့ပါ ဒါပေမဲ့ထင်တိုင်းဖြစ်မလာပဲ စစ်အုပ်စု ကြုံလိုက်ရတာတော့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတာကိုး ဒီတော့အညှိုးတကြီး ထောင်တွေချပါတယ် လူကြားမကောင်းအောင်ကိုချတာပါ အားလုံးသိပြီးသားတွေပါ ဒီတော့ တလျောက်လုံး ညစ်ပတ်ခဲ့တာစစ်အုပ်စုဆိုတာ ထင်ရှားနေတာပါ အာဏာအတွက်ဆို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်တတ်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာ နောက်ဆုံးဘာမဆိုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း စစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို မျက်ခြေမပြတ် ရှိနေကြဘို့လိုပါတယ်။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 10:44 PM , 1 comments
အခုတလော စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသံတွေ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ကြားနေရပါတယ်။ ဖိုရမ်တွေမှာ၊ မီဒီယာတွေမှာ၊ chat room တွေမှာ ငြင်းကြ၊ ခုန်ကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြ၊ အမုန်းတွေပွားကြ၊ ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ လုံးဝမပတ်သက်တော့တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို အမြစ်လှန် တူးဖော်ပြီး တယောက်နဲ့ တယောက်တိုက်ခိုက်ကြနဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုတဲ့ သဘောတရားဟာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်ကနေ တဦးချင်း အဆင့်တွေ အထိ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသလို၊ ကြည့်မြင်တဲ့ ရှုထောင့်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အမြင်မျိုးစုံ ကွာခြားတာကြောင့် အဖြေမှန်တခုတည်း ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဒီဆောင်းပါးမှာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု အခြေခံသဘောတရားနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ရေးသားတင်ပြပါမယ်။
အိမ်တအိမ်မှာ မိသားစုဝင်တဦးက တဦးချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အများစုကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထိခိုက်စေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ မိသားစုအကြီးအကဲကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်တဲ့ မိသားစု ၀င်တွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ ရပ်ရွာထဲမှာ နေထိုင် သူတယောက်ယောက်က ရပ်ရွာအကျိုးကို ထိခိုက်စေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရပ်ရွာထဲက နေထိုင်သူ တယောက်ယောက်ကို ထိခိုက်စေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်လာတဲ့အခါမှာ ဒီရပ်ရွာရဲ့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဆိုတာ ရှိလာပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒါတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပါပဲ။
အဲ- ဒီအခါမှာ လူအများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ ထိခိုက်လာပြီ ဆိုတဲ့ အခါမှာကော ဆိုတဲ့မေးခွန်းက မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ Realism ရှုထောင့်အနေနဲ့ ကြည့် မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတွေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ လူအများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်မှုတွေ (ဥပမာ- မိမိနိုင်ငံတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ပိတ်ပင် စော်ကားမှုတွေ၊ နိုင်ငံတော်အကြမ်း ဖက်ပြုလုပ်တာတွေ၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇ၀တ်မှုတွေကို အားပေးဆောင်ရွက်တာတွေ၊ လူအများစု သေကြေပျက်စီးစေနိုင်မယ့် လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်လုပ်မှုတွေ) ကို လုပ်ဆောင် လာတဲ့အခါ ဘယ်သူတွေက အရေးယူမှာလဲ ဆိုတာက စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာတယ်။ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေ ပေါ်လာ တယ်။ ဒီဥပဒေတွေကို တနိုင်ငံချင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စုပေါင်းပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ ဆောင်ရွက်လာကြတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွေ ပေါ်လာတယ်။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 9:32 PM ,0comments
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 1:37 AM ,4comments
မေ ၃၀ .. ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်မှု ၆-နှစ်မြောက် ဆန္ဒပြပွဲ...
Oregon မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အပတ်စဉ်...
Oregon မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြပွ...